सर्प समात्ने जागिर, मासिक ५० हजार तलब - TV Annapurna
के तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईलाई आर्कषक तलबसहितको जागिर खुलेको छ । मासिक ५० हजार बराबरको तलब आउने जागिरमा तपाई सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ । त्यो पनि विश्वविद्यालयमा ।
काठमाडौंमा दिनदाहाडै सुनको सिक्री लुटियो
त्रिवेणी उच्च मा.वि. कटारीको स्वर्ण जयन्ती शुरु, राष्ट्रपतिबाट स्तम्भको अनावरण गरिने